Waraanni Dhokatee Addigiraat irraa Gara Wallaggaatti Godaanaa jiru, harras Walii galtee angaahota waraana Tigiraayiifi Uummata Tigirayiin Karaan itti cufamee dhabbachaa jira. – Kichuu
HomeNewsWaraanni Dhokatee Addigiraat irraa Gara Wallaggaatti Godaanaa jiru, harras Walii galtee angaahota waraana Tigiraayiifi Uummata Tigirayiin Karaan itti cufamee dhabbachaa jira.
Dargaggoonni Tigraay akka konkolaataaleen waraanaa meeshaa takkallee naannoo sana keessaa fuudhanii hin deemneef waamicha walii dabarsaa jiru. Haaluma kanaan bakkoota adda addaatti karaa cufuun akka qabeenyaan RIB Tigraay keessaa hin sossoone godhaa jiru. Kun ajaja TPLFiin alatti akka hin ta’in beekamaa dha.
Yeroo ammaa hogganoonni mootummaa naannichaa fi ajajoonni waraanaa dhimma kana irratti waliin haasa’aa jiru. Kun tuffii mootummaa federaalaaf qaban karaa ittiin ibsaa jiran keessaa tokko. Naaannolee biyyattii kamuu caalaa mirgaa fi humna addaa akka qabantti agarsiifachuu barbaadu. Mootummaan tarkaanfii malu fudhatee akka Tigraay naannoolee biyyattii hafan keessaa mirgas tahee humna addaa qabaachuu hin dandeenye mirkaneessuutu irraa eegama.
Waraanni Dhokatee Addigiraat irraa Gara Wallaggaatti Godaanaa jiru, harras Walii galtee angaahota waraana Tigiraayiifi Uummata Tigirayiin Karaan itti cufamee dhabbachaa jira. Gamnummaan Abishuu baranaa Waraana sochii irraa hambisuu hin dandeenye. Nutti ilmaan Wallagga Warranicha ugguruu miti Boombii itti yoo darban, Gammachuun keenya daangaa hin qabu. Waaraanni kun Warruma Tigiray haa eegu wallaggaa maal hojjetta !? Waranichis kan Uummata Itoophiyaa miti Uummata kijibuun haadhaabbattu. Jarumatu ijaarrate jaruma haatiksu. Waraanni akkasitti akkuma salphaaatti utuu dhagaan karaan hin cufatiin, utuu rasaasni hin dhukahiin, utuu namni tokko hin madayiin, lubbuun tokko utuu hin darbiin Tigirayitti Dhaabbatu kuni Abbaa Isa Ajaju qaba. Warri akka Roobotii kursii irra taahee Oromoo goyyoomsu kursii gadidhiisuu qaba. Waraanumti akkas Ajajaa dhagayu kuni gaafa Wallagga gahu, Gaafa Boorana Gahu ajjaja eenyuun Magaala irratti Boombii akka dhoosuufi Uummata wallagga fi Booranaa dachee irraa duguugaa akka jiru namaafuu ifaadha. Nus waraanni kun hamma Uummata keenya bakka hin buunnetti, Dachee Wallagga irra ijaajjuu akka hin dandeenye itti agarsiisuun dirqama taati !
Waraanni Kun Dachee Oromiyaa kam keessa sosohuuf mirga itti hin qabu
It is time for the commander in chief to act fully as per his mandate to protect EDF image which can have a bad consequences in the future